डाक्टरको चरम लापरवाही: सुत्केरी गराउँदा डाक्टरले बच्चालाई जोडले तान्दा बच्चा २ टुक्रा::आर एम खबर
डाक्टरको चरम लापरवाही: सुत्केरी गराउँदा डाक्टरले बच्चालाई जोडले तान्दा बच्चा २ टुक्रा
तीन दिन पहिले दीक्षा कँवरलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि परिवारले रामगढ अस्पताल लिएर गएका थिए । यहाँ भनाइ गरेपछि डाक्टरले भने कि बिरामीलाई जैसलमेर लिएर जानू । तर, उनीहरुले यो बताएनन् कि बच्चाको टाउको भित्रै रहेको छ । रामगढ अस्पतालका चिकित्सा प्रभारी डा. निखिल शर्माका अनुसार जब महिलालाई अस्पताल ल्याइयो त्यसपछि डाक्टरहरुले उनलाई प्रसव कक्षमा लिएर गए । त्यहाँ उनीहरुले देखे कि बच्चा मृत अवस्थामा थियो र बच्चाका खुट्टा बाहिर निस्केका थिए । यहाँ पूरा सुविधा नभएपछि उनीहरुले जैसलमेर रिफर गरिदिए ।
उता जैसलमेरको जवाहर अस्पतालका डाक्टर रविन्द्र सांखलालाई रामगढ अस्पतालबाट बताइएको थियो कि महिलाको डेलिभरी भइसकेको छ तर गर्भनाल भित्रै रहेको छ । राती १ बजे डा. सांखलाले गर्भनाल निकाल्ने प्रयास गरे तर उनले केही बुट्टनै सकेन् । उनले महिलाको स्थिति स्थिर बनाए र भोलिपल्ट बिहान पुनः प्रयास गरे । तर त्यतिबेला पनि उनले केही बुझ्न सकेनन् । त्यसपछि महिलालाई जोधपुर रिफर गरियो । जोधपुरको उम्मेद अस्पतालमा डाक्टरहरुले महिलालाई सुत्केरी गराउँदा बच्चाको टाउको मात्र निस्कियो ।
जवाहर अस्पतालकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. उषा दुग्गडका अनुसार उनको पूरा करिअरमा कहिल्यै यस्तो भएको छैन । बच्चाको दुई टुक्रा कसरी भयो यो जाँचको विषय भएको उनले बताइन् । उनका अुसार सबैभन्दा ठूलो कुरा त रामगढ अस्पतालमा बच्चाको २ टुक्रा हुँदा पनि परिवारलाई केही भनिएन र उनलाई जैसलमेर रिफर गरियो । जोधपुरको उम्मेद अस्पतालमा डाक्टरले परिवारलाई बच्चाको टाउको दिएपछि परिवार टाउको लिएर रामगढ पुलिस स्टेशन पुगेका थिए । पुलिसले रामगढ अस्पतालमा गएर सोधपुछ गर्दा त्यहाँका कर्मचारीले बच्चाको बाँकी शरीर ल्याएर दिए । शरीरको पोस्टमार्टन गर्न पठाइएको र मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको पुलिसले जनाएको छ ।